Nke anyi atụmatụ dị na.
Anyị na-ekwe nkwa na a na-ezigara ndị ahịa ngwaahịa ahụ na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ịchọrọ ịmatakwu banyere ， kpọọ anyị ozugbo. Ruo ugbu a, Rayson agafeela asambodo sistemụ njikwa njikwa mba ụwa. Ngwa niile gụnyere ngwaahịa ọhụrụ anyị na-ọnọ na otutu imewe, na-ekwe nkwa àgwà, na asọmpi ahịa. Site na usoro mmepụta na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, Rayson nwere ike ịkwado onwe ya, mepee, rụpụta ma nwalee ngwaahịa niile n'ụzọ dị mma.
Ogologo oge ole ka akwa ụra gị kwesịrị ịdị? Matarasị ọ bụla dị iche. Ọ bụrụ n ’ị na-amali elu n’abalị ma ọ bụ jiri ụra teta ụra oge eruola ka ị nweta akwa ụra ọhụrụ n'agbanyeghị afọ ole ọ dị. Anyị na-akwado ịlele mkpado iwu ma dochie ma ọ dịkarịa ala afọ asatọ ọ bụla. An nwere ike inyere m aka ịme nke anyị ma ọ bụ jiri akara m na ngwaahịa ahụ? Anyị nwere ike ime matraasi dị ka gị imewe ma ọ bụ nye OEM ọrụ dị nnọọ mkpa ka ị na-enye anyị ngwaahịa gị artwork ma ọ bụ logo photos.May m gaa gị factory? Ee, ịnabata ileta ụlọ ọrụ anyị n'oge ọ bụla, anyị nọ nso ọdụ ụgbọ elu mba Guangzhou Baiyun, ọ na-ewe naanị otu awa n'ụgbọ ala, anyị nwekwara ike ịhazi ụgbọ ala iji bulie gị.